Kutheni le nto iMax Wins kwi-infinity Reels Slots limited? – CYMRU
Kutheni le nto iMax Wins kwi-infinity Reels Slots limited?
No Comments on Kutheni le nto iMax Wins kwi-infinity Reels Slots limited?
Kwangexesha elithile, umbono omtsha uza kunye othatha umhlaba wekhasino we-intanethi ngesiphango. I-infinity Reels inezinto ezenziwayo zotshintsho lomdlalo kwi-intanethi slots world.
Oomatshini banokongeza inani elingapheliyo lee-reels kwigridi (ngenxa yoko “infinity”). Ngapha koko, inika ithuba lokuphumelela amabhaso aphindaphindi kwaye amakhulu.
Ngokuthathela ingqalelo ukuba akukho kuphela umda kwinani leefels ezinobuxhakaxhaka bobuchwephesha, ucinga ukuba iintlawulo ziya kuthi zingangqinelani. Kodwa ukuba ukhe wafunda uphononongo kwi-infinity Reels slots, uyakuqaphela ukuba awona manqaku aphezulu aphumeleleyo.
Injani le meko? Ndiza kuxoxa ngakumbi malunga ne-infinity Reels ngokubanzi kunye nokufumana amabhaso amancinci ukuya kwinqanaba elithile.
Isebenza njani i-infinity Reels?
Iinguqulelo ezimbini ze-infinity Reels zikhona ngexesha lokubhalwa:
ReelPlay’s infinity Reels
Kwimeko yokuba uzibuze, akukho miba yamalungelo obunini aphathwayo apha. I-ReelPlay kunye ne-NetEnt zikhuphe zithini iindlela ezilinganayo ngexesha elinye.
Awunakho ukuqaphela umohluko omkhulu phakathi kwezinto zombini zokuphuhlisa ekuqaleni. Nangona kunjalo, zahlukile ngeendlela ezincinci.
Nalu ulwahlulo kwindlela abahluka ngayo omnye komnye:
Iwina ifom ubudeude obu-5+ beempawu ezihambelana nomhlaba naphi na kwi reels.
Reel yongezwa kuphela xa isimboli yokudibanisa ivela kwelona lungelo lisheel.
Ibhonasi inika umphindaphindi wokuwina.
Iimpawu zifuna ubuncinci ubuncinci beesimboli ezi-3+ kwiarhente nganye.
UReel wongezwa naluphi na uhlobo lokuwina.
Ibhonasi inikezela ngeentlawulo eziqinisekisiweyo.
I-infinity kunye ne-infinity Reels zifana kakhulu kuba zombini zinika ithuba lokongeza iirekhodi ezingenakubalwa. Njengoko ubona, nangona kunjalo, banokwahluka okuncinci kwindlela abasebenza ngayo.
I-Winins ifanele ukuba ibe nguNgcino
Uninzi lwee-slots zinexabiso elimiselweyo le reels. Ukuba udlala i-reel emihlanu, i-25-line slot, umzekelo, inani lee reels alisoze likhule ngaphaya kwesihlanu.
Ukuza kuthi ga ngoku, eyona kuphela ibiyigridi. Eminye imidlalo esekwe kwigridi ibona iigridi ikhula xa uhlangabezana neziqinisekiso ezithile.
Umdlalo ungaqala ngokuseta i-4 × 4. Nangona kunjalo, iigridi ikhula ibe yi-8 × 8 xa ushukumisa i-spins yasimahla.
Ezi ntlobo zemidlalo ngokuqinisekileyo ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo kumhlaba wokutyibilika. Nangona kunjalo, i-Infinity Reels ithathe umxholo wegridi ekhulayo ukuya kwinqanaba elitsha.
Nokuba kwimeko yomzekelo wangaphambili, ngekhe kuhlale ngaphezulu kwama-reels asibhozo. I-infinity Reels okanye i-infiniReels slot inokuthi iorenti ivumele iigridi ukuba ikhule ibe ngunaphakade.
Inani elikhulayo leefayile linempembelelo efanelekileyo ekuhlawuleni. Ucingela ukuba ugcina imiqondiso yokutsala ngokudibeneyo yangoku kunye nokongeza iiris, kuya kufuneka ukuba uphumelele isixa semali esingenamda.
Kodwa le nto ayibonakali iyinyani. Endaweni yoko, abaphuhlisi babonisa ukuphumelela okuphezulu okugcinwe kwinani elithile.
Umzekelo, unokukwazi ukuphumelela ukuya kwi-10,000x kwisibonda sakho. Ukuba ubheja nge- $ 10 ecaleni kwakhe, uya kuba nethuba ukuya kuthi ga kwi-100, 000 yeedola.
Intlawulo eyi- $ 100k ngokuqinisekileyo intle, kodwa ayihambelani ncam nalo mbono upheleleyo. Kwakhona, kuya kufuneka uphumelele isixa semali esingenasiphelo ukuba ufumana ithamsanqa kakhulu xa ujonga i-reels engapheliyo ekhoyo.
Ubuninzi obugqityiweyo bugqitywe ziziphumo
Amanani owabonayo aziswa kwiscreen senkcukacha somdlalo amiselweyo. Abaqulunqi basebenzisa iinyani ezibandakanya amakhulu ezigidi okanye amawaka ezigidi zesipin.
Basebenzisa idatha eqokelelwe kwezi zibisi ukufumanisa ukuba ibuyela kumdlali (i-RTP), ukubetha rhoqo, ukungazinzi, kunye nentlawulo ephezulu.
Kweminye imidlalo, ibhaso eliphambili ligciniwe. Islamba esine-reels esimileyo asizukuhlawula ngaphaya komvuzo waso ophezulu xa kuthathelwa ingqalelo ukuba igridi ayinakukhula.
I-infinity Reels slot iyahluka kwithiyori. Ingabhatala ngaphezulu komvuzo omkhulu ukuba unokuba nethamsanqa.
Nangona kunjalo, ukuhlawulwa okuphezulu kwe-max kuvela kwisifaniso esibonisa ezininzi i-spins. Okungaqhelekanga kukuba awusoze usondele kwi-jackpot-yeka udlule kwesi sixa.
Ungaphumelela kangakanani nge-infinity Reels Slots?
Ungabona ukuba phantse akunakwenzeka ukuphumelela ngaphezulu kwe-jackpot edwelisiweyo kumdlalo we-infinity / infiniReels. Kodwa nje ungaphumelela kangakanani ngenye yezi slots?
Nazi amabhaso aphezulu avela kwimidlalo ye-infinity ekhoyo kunye ne-infiniReels:
Oothixo beGolide InfiniReels-25,000x isibonda sakho
I-Odin infinity Reels Megaways – 20,000x
I-Giza infinity Reels – 10,000x
I-El Dorado infinity Reels – 6,250x
Ngaphandle kokuba ubheja imali eninzi kuthotho ngalunye, awuyi kuba sisityebi kakhulu ngale midlalo. Kodwa ngokuqinisekileyo unokufumana intlawulo entle.
Nantsi into onokuyilindela ukuphumelela kumdlalo ngamnye xa utsala i-10 yeedola:
Iigolide zegolide = $ 250,000 yokuhlawula okuphezulu
I-Odin = $ 200,000
Giza = $ 100,000
El Dorado = $ 62,500
Ucinga ukubheja i- $ 1 okanye ngaphantsi kumjikelo ngamnye, uza kuphumelela imali encinci. Nangona kunjalo, ukuphumelela amawaka eedola kwisibonda esincinci kuya kuhlala kumnandi nakweyiphi na imeko.
← I-UFC kwi-ESPN + 32: I-Lewis vs Oleinik AmaSilamsi Ukubheja ukubuka kuqala, ii-Odds, iipick → 2020 Ukujonga ukubheja kweHambletonia